Af soomaali (Alif Beet) [Kaydka] - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Aqalka Aqoonta Guud > Aqoonta Guud > Af soomaali (Alif Beet)
Arag soo saarista oo dhan : Af soomaali (Alif Beet)
Marka hore salaamu calaykum. waxaan jeclahay inaan casharro Alif-beetka Afka Soomaaliga ah soo bandhigo iyaga oo is daba socda si ardayda ku cusub ay si sahlan ula qabsadaan oo aysan culays ugu noqon.
Marka hore Afka Soomaaliga marka la qorayo waa afafka ugu dhibka yar uguna dhibka badan sababtuna waa labada qaybood ee uu u qaybsamo. Balse, qofkii carabiga iyo afaf kale qori yaqaan wuu u sahlanyahay. Ogow marna Carabi baynu ku sharraxaynaa marna Ingiriisi si loo ogaado dhawaaqa kilmadda oo aannu u aragnay inay sida ugu sahlan ee loo baran karo tahay.Waxba yaynaan horudhaca ku dheeraan ee aynu toos u bilowno. Digniin xubnaha waxaan ka codsanayaa inaysan wax jawaab ah ku darsan illaa duruustu ka dhammaanayso sababtoo ah dad baan Hoyga Aqoonta adeegsan aqoon marka saa li'ajligeed ayaan u codsanayaa idinkaana mudan oo mahadnaqiinna allaha idinka abaal mariyo.
Soomaaligu wuxuu ka koobanyahay (21) xaraf oo loo yaqaan iyo (10) shaqal ah
1- (Shibbane) = (Aammusan)
2- ( Shaqal ) = ( Meel walba gala )
( Shibbane ) = ( Aammusan )
Shaqalku waa labo nooc
B- ( 5 ) Shaqal gaab = (Shaqeeya gaaban)
T- ( 5 ) shaqal dheer = (Shaqeeye dheer)
( Shaqal Gaab )
( Shaqal Dheer )
( Shibbane )
Macnaheedu waa shib oo ma hadlo oo kale dhaq-dhaqaaqna ma leh taagan oo mar walba shaqal baa u dhexeeya.
( Shaqal ) waa shaqaysiin oo kale oo dhaq-dhaqaaq leh ama soc-socda xarfihiisuna ku jiraan labo shibbane dhexdood mar walba.
( Shibbane ) sida loo akhriyo:
يَ هَ وَ نَ مَ لَ كَ قَ فَ غَ عَ ضَ شَ سَ رَ دَ خَ حَ جَ تَ بَ
U fiirso kulli waxay leeyihiin ( Kor dhow ) ( Digniin xooga ) Fadlan haddaad baranayso ama qof kale barayso waa in deriskan lagu xifdiyaa labo maalmood ugu badnaan, si'aynu u bilowno shaqalka oo isagu ka sahlan. Mahadsanid.
( Shaqalka Gaaban )
(B) = Mid walba xarafka MIDABKAN LEH sida loogu dhawaaqo ugu dhawaaq.
( Shaqalka Dheer )
(B) Midabka tan leh raac sida loo akhrinayo.
Fadlan xifdi si'aynu ugu soconno horay.oo qorista ku celceli.
Deriskan waa muhim oo waxaa la'isku xirayaa Shaqal iyo Shibbane oo aynu horay u soo barannay.Waxaana loo akhriyaa sidii hore ee aynu u akhrinaynay.Waxaana is beddelaya (a e i o u ) laakiin marka lagu xiro adiga oo xarafkii hore sheegaya shaqalkii aynu barannay ku xir.Haddaad aragto ( و iyo ى ) waxay u dhigmaan
(E iyo O ) oo waxaa jira xarfo aan lagu qori karin Ingiriis.Mahadsanid.
Labo illaa saddex goor ku qor warqad illaa aad ka qabanaysid.
(Markaad qorayso oo akhrinayso Shibbane walba Shaqalkiisa raaci.)
Deriskii hore waxaan rajaynayaa inaad qabateen oo ka soo baxdeen.Hadda waxaynu isku qabanaynaa shibbanaha iyo shaqalka dheer.Waxaynu adeegsan
(و iyo ي) Oo aynu u qaadanayno sida (e iyo i) waxayna wataan u fiirso(Kor dhow,Hoos dhow,Godan,iyo Reebban.) ( ُ ِ ) Warqadda iyio qalinka ha'illaawin.
Waxaan rajaynayaa sharraxan dadku badi waa yaqaan Qur'aankee inuu si sahlan u fahmo.
(َ َ ِ ُ ْ ) Hadda aynu qorno kalmad Carabi ah Soomaalina ah.
عَــــمَــــلِِْ Camal:: Ma'aragtaa labada A inay u dhigmaan labada kor dhow, la'duna ku reebbantahay oo ku istaagtay.
Mid kale aynu qaadanno.
(A)	= َwaa kor dhow-ga Ba'da iyo Na'da
(AA) = Waa alifka ku taagan Na'da
(i) = Waa hoos dhowga Daalka
(R) = Ra'da kalmaddaa ku'istaagtay waana reebbantahay.
Casharkan waxaynu isku xiraynaaa shibbanaha iyo shaqalka oo inoo noqonaya kalmad ama weer dhan oo saddex xaraf ka kooban, mana aha inay sax ahaatee waa tusaale oo keliya.
Codsi: Fadlan ku dar inta kale adiga oo adeegsanaya tusaalooyinka kore.
Waxaynu ka shaqaynaynaa shaqalka dheer iyo sida uu isugu toosayo.Mar kale ma'aha inay kilmaddu sax tahaye la soco.
Xarfaha labo laabma oo ah Shibbanuhu waa ( 7 ). Macnuhuna waxay noqonayaan labo xaraf oo meel wada gala. Waxaa lagu soo koobaa xarfahaas
Aynu isla aragno sida ay noqonayaan oo xaraf xaraf u qaadanno kilmadna gelinno. La soco
oo u fiirso intani waa misaal ee kuwa kale oo badan ayaa jira ee sida loo qorayo ka fiirso.
M = Xammaali. Xam-maali
N = Hannaan Han-naan
L = Wallaahi Wal-laahi
G = Oggol og-gol
R = Carrab Car-rab
D = Hadda Had-da
B = Cabbaar Cab-baar
Fadlan intan ha'ilaawin labo labadan xaraf iyo kuwa kale mar walba u fiirso, si'aad u siiso afkaaga hooyo xurmaduu kaa mudan-yahay.
Intaas kuma eka qoraalka Soomaaligu ee intan baa sii hagaajisa.
( , ) Hakadka hoose wuxuu kuu sheegayaa meesha u baahan in qoraalku istaago wax yar.
( ' ) Waa hakad dhuunta hakinaya waana inuu kor fuulaa xarafka u danbeeya xarfaha korkooda.
Maxay ku kala duwan yihiin? ( ') ( , ) Waa, hadalka marka aad qorayso waxaa jira meelo qoraalku kaa codsanayo inaad hakad hoose geliso ama dhibic, marka hakad-ka hoose ayaa sidaa loo adeegsadaa. Sidan ( Waxaan bartaa qoraalka Afka Hooyo,waanan dadaalaa hadda.). Waxaad hakatayi waa hakad qoraal iyo hadal ku saabsan.
Hakadka sarena waa sidane u fiirso iyaga oo af Soomaaligu ku dhanyahay kuwa badan oo aan la tira koobi karin.
Marka kilmadahan u fiirso qoraalkooda kuwa kalena waad heliye sidaa u qor mar walba.
( Lo' Go' Si'aynu, Sidaa li'ajligeed Go'aan. Ma'oga Bu'aale (Gobol) Ma'aragtay )
Ma'aragtaa faraqa u dhexeeya ( ' iyo , )
Tilmaamo kale aan qorno :::
Walaalkay go' buu gatay, wuuna guntanaa maanta.
Lo'dii ceelkay ka cabtay, wayna laabanaysaa.
Ma kula tahay inaanan arag,Bu'aale.
Waan dhoofayaa, sidaa li'ajligeed kuma illaawayo.
Waxaan idiin rajaynayaa faa'iido ubadkiinna aad ugu faa'iidaysaan.Haddaan qaldamo fadlan ha'iga gaabsannina ee jawaabta iigu soo sheega si'aan isu saxo oo aynaan khalad weligeen ugu jirin.Mahadsanid akhriste.
isku xirka iyo kala fogaynta qoraalka Afka-Soomaaliga. Casharkani waa (Shaqalka gaaban)
Waxaa jira kilmado is qabsada oo yeesha macno ama ah kilmad iyo kuwo haddii la kala fogeeyo macno kale yeelanaya oo u baahan in laga digtoonaado.Hadda waxaynu u qaybinaynaa kuwa shaqalka oo uu ku saabsanyahay casharkani oo haddii la'isku dhejiyo macno soo saaraya haddii, la kala fogeeyana wax kale muujinaya.
Xarfaha keli istaagaya la qabadsiinayo kuwo kale. Faah-faahin dheeraad ah
A Ani,Adi,Arbaco,iwm A'du keligeed ma'istaagto.
E Edeb,Eri,Iwm E'du keligeed ma'istaagto.
i sii,i dil,i tun,i kab,iwm idil,irdhow,illow,iwm i'du hadday ka horrayso kilmad caadi ah oo keligeed istaagi karta, baa la qorayaa oo bannaan baa loo dhexaysiin labadooda
Orod,Onkod,iwm O'du keligeed ma'istaagto.
U bax,U fur,U beddel,U taallo,U sheeg,U tag,U shid,U fuli,iwm Ubax,Ustaad,Unug,uf,Urur,Ubad,usha,Ujeed do,iwm. U'du waa sida i'da tan ka danbaysaa xukunta oo shibbanaha ah.
Macnaha aan deriskan u soo qaadaynaa waxay yihiin in la kala saaro qoraalka si'uusan kaaga khaldamin. Ogow Gobolkaad doonto ka soo jeed ama, lahjaddaad doonto ku hadal ee waxaa muhim ah in aad si sax ah u qorto qoraalka oo la fahmo iyada oo aan lagu dhibaatoon. Mar walba ahow qof ku xeel dheer afkiisa hooyo.
Aa Aamiin,Aamin,Aabbe,Aabi,iwm. Aadu keli ma'istaagto.
Ee Eed,Eeddo,Eebo,iwm. Eedu keli ma'istaagto.
Ii Ii hay,Ii imow,ii maqan,ii nac, ii soo soo bax,ii kaalay, ii dhaq, iwm.
Iida waxaa jirta kalmado go'an oo yar sida Iid iwm oo aan la kala fogayn karin.Iidu hadday ka horrayso kalmad keli istaagta bannaan u samee oo kala fogee.
Oo Oo ma'aragtay,Oo ma maqashay,iwm. Oon,Ood,iwm Waa halhays la raaciyo hadalka marka la sheekaynayo laakiin marka la qorayo (OON) Waa (Oo aan)(Oodna) Waa (Oo aad).
Uu Uu arkay,Uu maqlay,Uu eegay,iwm. Uur,Uubato,iwm. Uudu waa sida ii-da oo kilmadda ka danbaysaa xukunta. Lana soco Uudu mar mar bay ku dhagtaa lagana fogeeyaa kalmadaha oo sidaad kor ku aragtid sida, UUR,UUBATO iyo kuwa kale oo badan.
Waxaa jiri kara inaad qoraalkaygan wax ka garan weydo ama sidaad u fahmi karto aanan kuugu soo bandhigine ila socodsii, adiga oo iimeelka golaha ama faylkayga shakhsi riixaya oo ku soo diraya, oo markaan Golaha soo galo arkayo warqadihiinna.Mahadsanid Akhrista.
Iimeelka Golaha: http://barnaamij.com/vb/sendmessage.php
Faylkayga shakhsi: http://www.barnaamij.com/vb/member.php?u=2
Af Soomaaliga lagu hadlo ee aan la qorin.
Waxaanan ka rajaynayaa Macallimiint Afka ku xeel dheeri inay ka shaqeeyaan oo noogu daraan intan oo ah waxyaabaha afkeenna qiimo kordhinta ku samayn kara.
Sida xarafka ذ Ama (Th) oo kilmado badan leh laakiin aan la qorin iyo xarafka ظ oo isna halkan aanan ku koobi karin badankooda laakiin, afka ka buuxa.
Sida ذ kuwan oo kale:
Xarfaha ah ظ du waa kuwan:
Xuruuftu badan laakiin intan ayaan hadda maskaxda ka soo helaye la soco.
Kalmadaha la'iska jirayo oo aan wax la raacin.
oo dhisa Afka Soomaaliga.
Ma Ma'aragtaa,Ma maqashay,Waana su'aalaha iwm.
Ka Ka warran,Ka socota,Ka timid,Ka xishood,Su'aal iyo eray waa tahay.
Ku Ku jirta,ku socota,Ku socda,ku dar,ku jir,iwm.
Baa Baa la yiri, Baa loo malayn isaga baa, iyada baa iwm.
Ayaa Heblo Ayaa timid, aniga ayaa, iyada ayaa,iwm
Ayo Waa ayo? Ayo? oo u dhiganta keligeed (kee ama qofma)
Naa Naa heedhe,Naa yaa,markan danbe badana waa la'isku dhejiyaa. Waana eray aan habboonayn in la'adeegsado.
Waa Waa run, Waa waray, Waa jirtaa, Waa dhacdaa, Wa la heli karaa,Waa la maqlay,waaa la'arkay.iwm.
Ha Ha sheegin,ha noqoto,Ha tagto,ha tago,Ha arko,ha maqlo iwm.
Hee Hee dheh, Hee! dhagaysiga loo adeegsadaa.
La La tali,La arkay, La maqlay,La sheegay,iwm.
Loo Loo qoro, Loo tuso, Loo baro, Loo akhriyo,
Taa Taa ku darso,Taa dheh,Taa u sheeg iwm.
Soo Soo saare,Soo soco,Soo mar,Soo dhowow,iwm.
Sii Sii soco, Sii cun,Sii joog,iwm.
Saa Saa u sheeg,Saa u dheh,Saa u joog,iwm.
Ha'u Ha'u tegin,Ha'u dirin,Ha'u falin iwm.
Ha & Ka Ha ka noqon, Ha ka murmin, ( Waa labada aan is qabsan oo la kala fogeeyo.)
Qoraallada suugaanta marka la'akhrinayo iyo marka la qorayo kala duwan.
Ula jeeddadu waa in la kala saaro qoraalka afka iyo ku luuqayntiisa ama sida loo oranayo. Kaba soo qaad gabayada heesaha amaba marka la hadlayo hadalka waa la koobaa laakiin marka la qorayo waa in loo qoro sida saxa ah oo la kala saaraa lana kala soocaa.
sida loo qoro Sida loogu hadlo (luuqeeyo)
Ha'u dirin Haw dirin
ha'u tegin Haw tegin.
Ha'u bixin Haw bixin
jaraynaya ayaa jaraynayaa
tagaya ayuu tagayuu
Aniga oo aan Anigoon
Iyada ayaad aragtay Iyadaaad aragtay
Marka way badanyihiine ka taxaddar haddaad noqonayso qoraa iwm.
Xarfaha Soomaaliga ka maqan..
Sidaan kor ku sheegnay kuwa lagu hadlo ee aan la qorin ayaynu hadda ku guda jirnaaye aynu isla eegno.
Xarafka ( L )
Oo ah Xarafka 16-aad ee Alif beetka Soomaaliga ayaa jira nooc ka mid ah oo dadkeenna u gooni ah marka laga reebo la'da laban laabanta.
Aynu matal ahaan isla aragno (Laakiin fadlan, afafka waa la dhadhansadaa oo markaa la qoraaye dhadhanso.)
U fiirso carrabkaagu meesha uu qabsanayo markaad akhrinayso kalmaddaas kor ku qoran.
Labada La' ma kala duwanyihiin mise may? Hadday kala duwanyihiin waynu wada socon karnaa haddii kalese yaynaan murmin ee mar kale u fiirso meeshuu carrabku afkaaga ka'aadayo oo kaga dhacayo.
Hees baynu u soo qaadan si'aynu ku'ogaanno (La'da) aan la qorin ee u baahan adigaagan maalin maalmaha ka mid ah haddii fursad aad u heshid beddelisteeda inaad noogu dari doontid laga yaabee inaad mas'uul ka noqotid wasaaradaha iyo hay'adaha aqoonta qof ka tirsan.Ilaahay ha kaa dhigo.
Haddaba heestan ay qaaddo Hibo Nuura oo uu tiriyey Abwaan Xasan Sheekh Muumin Allaha u naxariistee u fiirso inta (La') halkaa carrabku bed-beddelayo.
Laalays dusheed iyo
laan gebi ku taal oo ay
Laaleys : Carrabkaa bilowgiisaa ku dhegaya kor.
Waana La'da dadka oo dhammi adeegsado oo bisinka marka la'akhrinayo lagu akhriyo.
Laag : (La'dani) waa mid kugu kallifaysa inaad afka furto ama cod u gooni ah la raacinayo,waana la' u'ah afkeenna mid gooniya afafka kale waa ku dhif.
Marka aynu isla eegno siday u kala duwanyihiin;
La' La rid
Marka halkaaas maxaad ka'aragtaa in La'du hadday raacdo ( A ) ama ( AA )
ay noqonayso (La') Soomaali saasaan ula baxaye laakiinse, aan ka ahayn (La'da) loo adeegsado sida La rid,La rux iwm.Haddii loo fiirsado labada (AA) haddii la raaciyo (La'da) oo shibbane sii raacayo oo shaqal ku sii xigo waxaa loo akhrin (La'da) ummadaha kale adeegsado sida (Laalays,Laakiin,Laadye iwm)
Midda kale (La'da) la mid ka ahi waa marka ay raacdo (U ama UU) oo waxay noqon (La') Soomaali sida (Lul,Lur,Luubaan iwm)
Marka hadal iyo dhammaantiis waxaan kuu rajayn akhristaha qiimaha badanow inaad maalin noqoto mas'uul waxbarasho si'aad u saxdo intaas iyo inta dheerba. Ogowna maah-maahda tiraahda (Awrba awrka ka horreeya saan qaadkiisuu leeyahay). Qof keligii cilmi bilaabay ma jiro ee qofna fikradda wuu keenaa, qofna wuu fuliyaa anna waa iga dadaal ee horay u wad.
Mahadsanid akhriste: Wixii faah-faahin ah oo aad ku darsanayso, ku soo dir iimeelkan.
Waa casharkii ugu danbeeyey, wixii jawaabo aad ku darsanayso iyo su'aaloba waa furanyihiin.
Waxaanan idiin ka'aqbalayaa si kal iyo laab ah. Mahadsanidin.
Markaynu ka hadalnay xarafka ((La')) oo aynaan u fiirsan laakiin, hadda aynu u fiirsannay ee bal aynu markan isla eegno xarafka ((B)) ama ((Ba'da))
oo isagu is beddela marka shaqal ka horreeyo ((A,E,I,O,U)) ((Aa,Ee,Ii,Oo,Uu)).
Marka aynu isla eegno:
Eber iyo Bar
isku ba' ma'aha sow ma'aragtid oo marka la leeyahay Eber ba'deedu waa fududdahay oo
bishimaha/dibnaha si orod ah baa loo kala qaadayaa marka Eber la sheegayo.
Bartana waa lagu dhejin oo waxaad mooddaa in afkeennu ku yahay hodan oraahyoda iwm
balse, aan la qorin. Midda labaadi haddaad u fiirsato wax walba oo aynu ku bilaabayno ba'da
waa ku dhejis mar hadday meel dhexe gashona waa mid fudud oo orod loo oranayo. Marka la
yaabka Ba'da u fiiros, hadday ku dhammaato kalmaddu waa mid adag siday doonto
ha'ahaatee. Sida, Cab,Kab,Culaab,Dhadhaab iwm.
Markaa waxaa inoo soo baxaya ba'uhu inay labo isaga mid ka yihiin bilowga iyo dhammaada
oo bishimaha/dibnaha lagu dhejinayo.
Ba'da labo laabantana waa gooni oo iyadu isma beddesho. Sida Cabbaar,Cabbir iwm.
Inta kale ee soo socota aynu eegno.
Ba' Jilicsan.. --------- Ba' Adag
Kibir ===== Baruur
Abuuris ===== Bur
Cabeeb ====== Bil
Xabeeb ====== Belo
Sidaan kor ku xusay iyo Xarafka La'da markaan qoraynay, waa inaad daryeel saa'id ah siiso
afkeenna Hooyo welina waan ku celine waa intaas oo aad mas'uul aqoonyahan noqotaaye
ama qoraa ee tani waa bilow adigaana lagaa sugayaa inaad horay u waddo iyo dhallinta soo
socota si'uusan afkeennu u xumaan.
Waxaan kuu rajayn akhriste aqoon iyo horay u socod joogto ah Inshaa'Allaah.
Mahadsanid akhriste: Wixii faah-faahin ah ku soo dir iimeelkan ama ku darso jawaabtaada wixii aqoon ah oo dheeraad ah adiga oo riixaya "Jawaab Ku Dar" ee qoraalka hoostiisa bidix ku taal ama qoraalka korkiisa bidix hadba kii kuu dhib yar.